Akụkọ - Ihe ngosi 11 nke Uzbekistan (Tashkent) nke International Fire Exhibition
Na Nọvemba 2019, Beijing Anbesec Technology Co., Ltd. sonyere na Securex Uzbekistan 2019, Ngosipụta Mba Niile nke 11 na Nchedo, Nchekwa na Nchedo Ọkụ.
Securex Uzbekistan a na-eme kwa afọ na Tashkent Exhibition Center nke Uzbekistan site na nkwado nke Protectionlọ Ọrụ Nchedo Ọkụ na Ngalaba nke ime obodo nke Uzbekistan.
Ndị ngosi ahụ si mba iri abụọ, wee nwee ebe ngosipụta nke square mita 6,200. Ihe ngosi ndi ozo bu ihe ndi oku na ihe ndi ozo: ugbo oku, nfuli oku, nchoputa oku na usoro mkpu, oku oku oku, ndi mmiri oku / oku, ndi oku oku / ndi ozo, ndi oku oku na ihe oku ndi ozo.
Usoro nyocha ọkụ nke ngwaahịa mkpuchi ọkụ nke Anbesec Technology Co., Ltd. gosipụtara na ihe ngosi ahụ kpaliri mmasị dị ukwuu site n'aka ndị isi nke ngalaba ọkụ ọkụ mpaghara. Ha biri n'ụlọ ntu anyị maka inwekwu nghọta ma dekọọ. (Foto dị na-egosi ebe ngosi ahụ)
Ndị gosipụtara ya sitere na mba iri abụọ, gụnyere ihe karịrị ndị ọkachamara 4220, nwere mpaghara ngosi nke mita 6,200. Securex Uzbekistan bụ naanị ngosipụta na Uzbekistan nke kpuchiri mpaghara nchekwa niile. Ihe ngosi a nwere ndi ngosi di elu ma ndi ochichi obodo na akwado ya nke ukwuu. Ọ bụ ihe ngosi ọkachamara ruru mba ụwa. Isiokwu nke Securex Uzbekistan bụ mmepe nke usoro nchekwa ọha na eze na mmepe mmepe nke mmekọrịta n'etiti ndị na-emepụta na ndị na-azụ ahịa, ndị na-ekesa ya na ndị ọkachamara na ụlọ ọrụ nchekwa.